Umgaqo-nkqubo weMfihlo - uMbutho we-Element
Umgaqo-nkqubo woBucala bewebhu
uzinikele ekukhuseleni ubumfihlo bakho. Qhagamshelana nathi ukuba unemibuzo okanye iingxaki malunga nokusetyenziswa kweedatha zakho zomntu kwaye siya kukunceda.
Ngokusebenzisa le sayithi okanye / kunye neenkonzo zethu, uyavuma ukuPhathwa kweeNkcukacha zaBantu njengoko kuchaziwe kule Mgaqo-nkqubo weMfihlo.
Iinkcazo ezisetyenziswe kule nkqubo
Imigaqo yokukhusela idatha esilandelayo
Ziziphi amalungelo onayo malunga neenkcukacha zakho zomntu
Ziziphi iinkcukacha zomntu esiziqokelela ngazo
Indlela esisebenzisa ngayo idatha yakho yomntu
Ngubani omnye onokufikelela kwiiNkcukacha zakho zomntu
Sinokukhusela njani idatha yakho
Ulwazi malunga nekiki
Idatha yakho - nayiphi na ingcaciso enxulumene nomntu wendalo ochongiweyo okanye ochongiweyo.
processing - nayiphi na umsebenzi okanye isethi yemisebenzi eyenziwa kwiNkcukacha zoLuntu okanye kwiiseti zeDatha Yakho.
Isihloko sedatha - umntu ongokoMntu oLwazi lwakhe oluPhezulu lwenziwa.
umntwana - umntu ongokwemvelo phantsi kweminyaka eyi-16.
Thina / kuthi (mhlawumbi ihlawulwe okanye ayikho) -
IMigaqo yoKhuselo lweNkcukacha
Siyathembisa ukulandela imigaqo-migaqo yokukhusela idatha:
Ukusetyenziswa ngokusemthethweni kuyamkeleka, kulungile, kuhleni. Imisebenzi yethu yokucubungula inesizathu esisemthethweni. Sisoloko sicinga ngamalungelo akho phambi koCwangciso lweeNkcukacha zoBuntu. Siza kukunika ulwazi malunga nokucwangciswa xa ufuna isicelo.
Ukucwangciswa kupheleliswe kwinjongo. Imisebenzi yethu yokucwangcisa ifanelana nenjongo yokuba idilesi zoBuntu iqokelelwe.
Ukucwangciswa kwenziwa ngeedatha encinci. Sibutha kuphela kwaye siSebenzise inani elincinci leDatha yolwazi olufunekayo kunoma yintoni injongo.
Ukucwangciswa kuphelelwe ixesha. Asiyi kugcina idatha yakho yangasese ixesha elide kunokuba lifuneka.
Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuchaneka kwedatha.
Siza kwenza konke okusemgangathweni ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokugcinwa kwedatha.
Amalungelo eSifundo seDatha
Isihloko soDatha sinamalungelo alandelayo:
Unelungelo lokufumana ulwazi-kuthetha ukuba kufuneka ube nolwazi lokuba ngaba iinkcukacha zakho zeNkcukacha zicutshungulwa; yiyiphi idatha eqokelelwe kuyo, apho ifunyenwe khona kwaye kutheni kwaye yenziwa ngubani na.
Ilungelo lokufikelela-kuthetha ukuba unelungelo lokufikelela idatha eqokelelwe ukusuka / malunga nawe. Oku kubandakanya ilungelo lakho lokucela kwaye ufumane ikopi yeenkcukacha zakho eziqokelelweyo.
Ilungelo lokulungiswa-oko kuthetha ukuba unelungelo lokucela ukulungiswa okanye ukuchithwa kweedatha zakho zomntu ezingachanekanga okanye ezingaphelelanga.
Ilungelo lokususa i-erasure-elithetha kwiimeko ezithile unokucela ukuba iiDatha zakho eziPhezulu zichithwe kwiirekhodi zethu.
Unelungelo lokunciphisa ukusetyenziswa - oku kuthetha ukuba izimo ezithile zisebenza, unelungelo lokunciphisa ukuPhathwa kweeNkcukacha zakho.
Ilungelo lokuchasana nokubhekiselele-ukuthetha kwamanye amaxesha unelungelo lokuchasa ukuCwangciswa kweeDatha zakho zomntu, umzekelo kwimeko yokuthengisa ngokuthe ngqo.
Ilungelo lokuchasana ne-Automatic Processing - elithetha ukuba unelungelo lokuchasa kwiComputer Processing, kubandakanywa iphrofayile; kwaye kungabi phantsi kwesigqibo esisekelwe kuphela kwiComputer Processing. Eli lungelo ungayisebenzisa xa kunesiphumo soprofayili eyenza imiphumo yomthetho malunga okanye ichaphazela kakhulu.
Ulungele ukuphatheka kwedatha - unelungelo lokufumana iinkcukacha zakho ezizimeleyo kwifomati efundekayo ngomatshini okanye ukuba inokwenzeka, njengokutshintshwa ngokuthe ngqo kwiprojekithi enye ukuya kwenye.
Unelungelo lokufaka isikhalazo - kwimeko apho siyayinqabela isicelo sakho phantsi kwamaLungelo okuFika, siya kukunika isizathu sokuba kutheni. Ukuba awunelisekanga ngendlela isicelo sakho esiphethwe ngayo sicela uqhagamshelane nathi.
Unelungelo loncedo negunya lolawulo - ithetha ukuba unelungelo lokuncedisa igunya lokulawula kunye nelungelo kwezinye izilungiso zomthetho ezifana nokubiza umonakalo.
Unelungelo lokurhoxisa imvume - unelungelo lokurhoxisa imvume nayiphi na imvume yokuPhathwa kweNkcukacha zakho.
Ulwazi olusinike lona
Le nto inokuba yidilesi yakho ye-imeyile, igama, idilesi yokubakho, idilesi yasekhaya njl. Ingakumbi ulwazi oluyimfuneko yokukunika imveliso / inkonzo okanye ukuphucula amava akho kumakhasimende nathi. Sigcina ulwazi olusinika lona ukuze ubeke izimvo okanye wenze enye imisebenzi kwiwebhusayithi. Olu lwazi lubandakanya, umzekelo, igama lakho nekheli le-imeyile.
Ulwazi oluqokelelwa ngokuzenzekelayo ngawe
Oku kuquka ulwazi olugcinwa ngokuzenzekelayo ngeekuki kunye nezinye izixhobo zeseshoni. Umzekelo, ulwazi lwenqwelo yakho yokuthengwa, idilesi yakho ye-IP, imbali yakho yezitolo (ukuba kukho nayiphi na enye) njl. Le ngcaciso isetyenziselwa ukuphucula amava akho kumthengi. Xa usebenzisa iinkonzo zethu okanye ujonge i-website yethu, imisebenzi yakho ingafakwa.
Ulwazi oluvela kumaqabane ethu
Siqokelela ulwazi oluvela kubalingani bethu abathembekileyo ngokuqinisekisiweyo ukuba baneendawo ezisemthethweni zokwabelana ngolwazi kunye nathi. Le ngcaciso enikeze yona ngqo okanye ukuba baqokelele ngawe kwezinye izizathu zomthetho. Olu luhlu lulandelayo: I-NCS Trust, i-EFL Trust.
Ulwazi olufumaneka luluntu
Singaqokelela ulwazi malunga nawe olufumaneka esidlangalaleni.
Sisebenzisa i-Personal Data ukuze:
kunika inkonzo yethu kuwe. Oku kubandakanya, umzekelo, ukubhalisa i-akhawunti yakho; ekubonelela ngeminye imveliso kunye neenkonzo ocelileyo; ukunikezela ngezinto zokuphromotha kwisicelo sakho nokuthetha nawe ngokumalunga nalezo mveliso kunye neenkonzo; ukuthetha kunye nokusebenzisana nawe; kwaye ukukwazisa utshintsho kwiinkonzo.
ukuphucula amava akho kumakhasimende;
ukuzalisekisa uxanduva phantsi komthetho okanye isivumelwano;
ukuthetha malunga nenkqubo yolutsha wena okanye umntwana wakho ubhaliswe kunye naye;
malunga neempumelelo ezivela kwiinkqubo zethu zolutsha;
ukuxhasa wena okanye wakho umntwana kwinkqubo yolutsha
Sisebenzisa iiNkcukacha zakho zomntu kwiindawo ezifanelekileyo kunye / okanye kunye neMvume yakho.
Ngesizathu sokungena kwisivumelwano okanye ukuzalisekisa izibophelelo zesikontrakthi, senza iinkcukacha zakho zeNkcukacha ngezi zilandelayo:
ukukunika inkonzo okanye ukuthumela / ukunikezela ngemveliso;
ukunxibelelana nokuba kuthengiswa okanye ukuhanjiswa;
Ngomdla wokubaluleka ngokusemthethweni, Senza Iinkcukacha zakho zoBuntu ngezi njongo zilandelayo:
ukuthumelela ngezibonelelo ezizodwa (ukusuka kuthi kunye / okanye iqabane lethu elikhethiweyo ngokukhethekileyo);
ukulawula nokuhlalutya isiseko sethu somxhasi (ukuziphatha kokuthenga kunye nembali) ukwenzela ukuphucula umgangatho, iintlobo, kunye nokufumaneka kweemveliso / iinkonzo ezinikwe / ezinikeziwe;
ukuqhuba iimibuzo ngokuphathelele ukwaneliseka kwabaxhasi;
Ngethuba nje ungazange usixelele ngenye indlela, sicinga ukunikela ngemveliso / iinkonzo ezifanayo okanye ezifanayo kwiimbali zakho zokuthenga / ukukhangela ukukhangela ukuba ube ngumdla wethu osemthethweni.
Ngemvume yakho senza iNkcukacha zakho zoBuntu ngezi njongo zilandelayo:
ukuthumela iincwadana zeendaba kunye nephulo lokunikezela (ukusuka kuthi kunye / okanye iqabane lethu elikhethiweyo ngokukhethekileyo);
ngezinye iinjongo esizicele imvume yakho;
Sisebenzisa Iinkcukacha zakho zoBuntu ukuze uzalisekise uxanduva olukhuphuka emthethweni kunye / okanye usebenzisa i-Idatha yakho yomntu kwiinketho ezinikezelwe ngumthetho. Sigcina ilungelo lokungaziwa ngeenkcukacha zaBantu kunye nokusebenzisa nayiphi na idatha. Siza kusebenzisa idatha ngaphandle koMgaqo wePolisi kuphela xa ingaziwa. Asilondolozi ulwazi lwebhidi njengemininingwane yekhadi lesikweletu. Siza kulondoloza olunye ulwazi lokuthenga oluqokelelwe ngawe ngokukhawuleza njengoko lufunekayo kwiinjongo zokubhala okanye ezinye izibophelelo ezivela kumthetho, kodwa zingadluli iminyaka engama-5.
Siyakwazi ukucwangcisa iinkcukacha zakho zoBuntu ngeenjongo ezongezelelweyo ezingakhankanyiwe apha, kodwa ziyahambelana nenjongo yokuqala eyayiqokelelwa kuyo idatha. Ukwenza oku, siya kuqinisekisa ukuba:
unxibelelwano phakathi kweenjongo, umongo kunye nemeko yeeNkcukacha zeNkcukacha zifanelekile ukuqhutyelwa phambili;
Ukuqhutyelwa phambili kweCandelo leMfundo akuyi kulimaza iinjongo zakho kunye
bekuya kubakho ukhuseleko olufanelekileyo lokuCubungula.
Siza kukuxelela malunga nayiphi na inkqubo yokuSebenza kunye neenjongo.
Asikwabelani ngolwazi lwakho lomntu nabantu abangabaziyo. Iinkcukacha zakho malunga nawe kwezinye iimeko zinikezelwa ngamalingane ethu athembekileyo ukuze wenze ukubonelela inkonzo kunokwenzeka okanye ukuphucula amava akho kumakhasimende. Sibelana nedatha yakho nge:
Amalingani ethu okusebenza:
Paypal kwiintlawulo. Ukwaziswa ngale nkqubo.
Bethu Abalingani beprogram:
I-NCS Trust - kwiinkqubo ze-NCS kuphela.
I-EFL Trust - kwiiprogram ze-NCS kuphela.
Sisebenza kuphela kunye namaqabane asebenzayo akwazi ukuqinisekisa izinga elaneleyo lokukhusela kwiiNkcukacha zakho. Sichaza iinkcukacha zakho kwii-third party okanye kumagosa karhulumente xa sibophelelwe ngokomthetho ukwenza njalo. Siyakwazi ukudalula iinkcukacha zakho kwii-third party ukuba uvumelekile okanye ukuba kukho ezinye izizathu zomthetho.
Senza konke okusemandleni ethu ukugcina iinkcukacha zakho ezikhuselekileyo. Sisebenzisa iiprotokholi ezikhuselekileyo zokunxibelelana nokudlulisa idatha (njenge-HTTPS). Sisebenzisa i -onymonym and pseudonyming apho kufanelekile. Sibeka iliso kwiisistim zethu zengozi kunye nokuhlaselwa.
Nangona senza konke okusemandleni ethu asikwazi ukuqinisekisa ukukhuselwa kolwazi. Nangona kunjalo, sithembisa ukuzisa abaphathi abafanelekileyo abachanekileyo beenkcukacha. Siyakukwazisa kwakhona ukuba kukho isongelo kumalungelo okanye iimfuno zakho. Siza kwenza konke esinokukwazi ukukhusela ukuphulwa kokhuseleko kunye nokuncedisa amagunya ukuba kukho ukuphulwa.
Ukuba unayo i-akhawunti kunye nathi, qaphela ukuba kufuneka ugcine igama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi.
Asihlose ukuqokelela okanye ukuqokelela ngolwazi oluvela kubantwana abangaphantsi kwe-14 nge-website yethu. Njengoko ulutsha luthando, kukho imfuneko yokuqokelela ulwazi malunga nabantu abatsha abanomdla kuzo, okanye ukuya kwiinkqubo zethu. Abazali baqhagamshelana malunga nale data xa iinkcukacha zabazali zinikezelwa.
Ikhukhi kunye nezinye ubuchwepheshe esisisebenzisa
Sisebenzisa ii-cookies kunye / okanye ezobuchwepheshe obufanayo ukuhlalutya ukuziphatha kwamakhasimende, ukulawula i-website, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi, nokuqokelela ulwazi ngabasebenzisi. Oku kwenziwa ukwenzela ukuzenza umntu kunye nokuphucula amava akho nathi.
Ikhukhi yile fayile yenkcazelo encinane egcinwe kwikhompyutha yakho. Ulwazi lwevenkile yekhukhi elisetyenziselwa ukunceda ukwenza isayithi isebenze. Kuphela sinokufikelela kwiikhukhi ezenziwe yiwebsite yethu. Ungakwazi ukulawula ii-cookies zakho kwizinga lomkhangeli. Ukukhetha ukukhubaza ikhukhi kunokuthintela ukusebenzisa kwakho imisebenzi ethile.
Sisebenzisa ii cookies kule njongo zilandelayo:
Ikhukhi eziyimfuneko - ezi cookies zifunwa ukuba ukwazi ukusebenzisa ezinye izinto ezibalulekileyo kwiwebhusayithi yethu, njengokungena ngemvume. Ezi cookies aziqokeleli nayiphi na ulwazi lomntu.
Ikhukhi zentsebenzo - ezi khukhi zibonelela ukusebenza okwenza isevisi yethu ibe bhetele kwaye yenza ukuba kubekho iimpawu ezenziwe ngabantu. Ngokomzekelo, banokukhumbula igama lakho kunye ne-imeyile kwifom yeefomenti ngoko akufuneki ukuba ufake kwakhona olu lwazi ngexesha elizayo xa uphendula.
Ikhukhi ze-Analytics - ezi khukhi zisetyenziselwa ukulandelela ukusebenzisa nokusebenza kwewebhusayithi yethu kunye neenkonzo
Ukukhupha ii-cookie-ezi cookies zisetyenziselwa ukuhambisa iintengiso ezichaphazelekayo kunye neminqweno yakho. Ukongeza, zisetyenziselwa ukunciphisa inani lexesha usibona isikhangiso. Zihlala zifakwa kwiwebhusayithi ngamanethiwekhi okuthengisa kunye nemvume yomqhubi wewebhu. Ezi khukhi zikhumbule ukuba uye watyelela iwebhusayithi kwaye le ngcaciso yabiwe kunye nemibutho efana nabakhangisi. Ngokuqhelekileyo ukujolisa okanye i-cookie yokuthengisa iya kudibaniswa nokusebenza kwendawo enikezwe enye inhlangano.
Ungasusa iikhukhi ezigcinwe kwikhompyutheni yakho. Ngaphandle koko, unokulawula ezinye ii-cookie ze-3rd ngokusebenzisa i-platform yokuphucula ubumfihlo optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. Ukufumana ulwazi oluninzi malunga nekhukhi, tyelela allaboutcookies.org.
Sisebenzisa i-Google Analytics ukulinganisa isithuthi kwiwebhusayithi yethu. I-Google ineMgaqo-nkqubo wayo wobumfihlo ongayihlaziya Apha. Ukuba ungathanda ukuphuma ekulandeleni i-Google Analytics, tyelela Ikhasi lokuphuma kwe-Google Analytics.
Igunya loLawulo loLwazi kwiNgilani - https://ico.org.uk - I-ICO - I-Office Commision Office
I-Element Society - biza i-0114 2999 214 ukuxoxa ngeenkcukacha.
Sigcina ilungelo lokwenza utshintsho kule Mgaqo-nkqubo weMfihlo.
Ukuguqulwa kokugqibela kwenziwa 21 / 05 / 2018.